JABUUTI:Geelle oo ku guuleystay Doorashada Madaxweynaha
You are at:Home»Warkii oo Dhan»Wararka»JABUUTI:Geelle oo ku guuleystay Doorashada Madaxweynaha
By Admin on	 April 10, 2021 Wararka
Shacabka ku dhaqn dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta oo Jimca ah u dareereen codbixinta doorashada 2021 oo ay ku tartamayaan Madaxweynaha xukunka haya Ismaaciil Cumar Geelle iyo Musharaxa madaxa bannaan ee Sakariye Ismaaciil Faarax.
Ammaanka goobaha ay ka dhacayso codbixinta ayaa aad loo adkeeyay.
Goobaha la dhigay sanduuqyada codeynta waxaa lagu diyaariyay Gacmo dhaq Marada Afka iyo sanka daboosha, waxaana aad loo ilaalinayaa isu dhawaanta dadka sida ka muuqaata muuqaallada laga soo duubay goobaha codbixinta.
Guddiga Doorashada Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa sheegay in tirada codeysay in ay dhan tahay 167,535-ruux, markii la tiriyay uu Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle helay boqolley ahaan 98.58% halka Musharaxa kale uu helay 1.42%.
Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Madaxweynaha Jabuuti noqday 1999-kii, waxa uu dalkiisa u horseeday waxqabad muuqda, isbadal Ganacsi, is dhexgalka Dalalka kala duwan ee Caalamka iyo martigelinta shirar kala duwan oo intooda badan uu u qabtay Soomaalida.